Child Pati – Together with Child
नियमित परीक्षणले आँखाको ज्योती जोगाउन सकिन्छ लामो समयदेखि तिलगंगा आँखा अस्पतालमा उपचारमा सम्लग्न रहनु भएकी डा. रबा थापासँग बालबालिकामा हुने आँखाको समस्या मूलत आँखाको रेटिनामा हुने समस्या र यसबाट बच्ने उपायका बिषयमा केन्द्रीत भएर गरिएको…
संघीय संरचनामा मन्त्रालयले बालमैत्रीको विषयलाई कसरी बढाउँछ ? स्थानीय तहको क्षमता विकासका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्छ । जस अन्तर्गत बालमैत्री, वातावरणमैत्री, कुपोषण अनि सरसफाईका विषयहरुलाई स्थानीय तहमा स्थापित गर्ने काम गर्छ । साथै कसरी बालमैत्रीलाई स्थानीय…
छुट्टै पाठ्यक्रम बन्दैछ
विद्यालयमा छुट्टै वित्तीय शिक्षाको लागि कुनै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण भएको छैन । गणित, अर्थशास्त्र, पेशाव्यवसाय, लेखा आदि विषयबाट अप्रत्यक्ष रुपमा वित्तीय शिक्षा दिइँदै आएको छ । यसरी नै अनौपचारिक शिक्षमा वित्तीय शिक्षाको बारेमा जानकारी…
बालबालिकालाई बचत मात्र होइन जुन सुकै विषय सिकाउने पहिलो भूमिका परिवारको हुन्छ । त्यसपछि विद्यालयका साथ साथै पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, अनलाइनले पनि बालबालिकालाई बचत सीप सिकाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । बालबालिकालाई बचत कसरी सिकाउन सकिन्छ…
अभियानका रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक
बालबालिकालाई बचत किन सिकाउन आवश्यक छ ? यो सबैले जान्नुपर्ने विषय हो । समाजमा कुलतमा परेका व्यक्तिलाई यदाकदा भेट्दा सोध्छु किन यस्तो गर्नुहुन्छ ? उहाँहरु भन्नुहुन्छ के गर्ने दाइ नानीमा लागेको बानी छोड्नै सकिँदैन ।…
बचत सिकाउने विभिन्न तरिका छन् । पहिलो कुरा त विद्यालयको पाठ्यक्रममा बचत अनि वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाएर विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । फजुल खर्च नगर्न र सही लगानीका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ…
Life is gift that needs to be treasured, Life is time that needs to be measured, Life is an adventure that needs to be challanged, Life isastruggle that needs to be faced. Life…